नेकपाको सचिवालय बैठकमा के के भयो ? « Pen Nepal
नेकपाको सचिवालय बैठकमा के के भयो ?
Published On :7October, 2020 7:08 am By : पेननेपाल
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालयको बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषयमा कुनै छलफल भएन । प्रधानमन्त्री निवासमा मंगलबारबसेको सचिवालयको बैठकमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको विषयमा छलफल हुने भनिएको थियो तर त्यसको विषयमा कुनै चर्चा नै नभएको बताइएको छ ।
बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आजको बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको बारेमा कुनै पनि छलफल नभएको बताए । उक्त विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले कुनै पनि प्रस्ताव नराखेको जानकारी उनले दिए । मन्त्रिपरिषद्मा खाली रहेका तीनवटा मन्त्रालयमा तीन मन्त्री पार्टीले सिफारिस गर्ने मंगलबारको कार्यसूची थियो । तर व्यक्तिको नाम टुङ्गो लागेपनि मन्त्रालयको टुङ्गो नलागेको कारण मंगलबारको बैठकमा छलफल नभएको स्रोतले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका लागि पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डेले दावी गरिरहेका छन् । यो विषयमा अध्यक्षद्धयको बीचमा सहमति नभएका कारण छलफल नभएको बताइएको छ ।
त्यस्तै, संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा पनि अध्यक्षद्धय ओली र प्रचण्डले आन्तरिक गृहयकार्य गरिरहेको र अर्को बैठकमा त्यो विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । सरकारले हालै गरेका केही नियुक्तिहरुको बारेमा छलफल भएको तर कुनै निश्कर्ष ननिस्केको बताउँदे प्रवक्ता श्रेष्ठले अर्को बैठकमा पनि यो विषयमा छलफल हुने बताए ।
त्यस्तै बैठकले डा।गोविन्द केसीलाई अनसन तोड्नका लागि आग्रह गरेको छ । डा.केसीको अनसनबारे प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले ब्रिफिङका क्रममा विगतमा चिकित्सका शिक्षा क्षेत्रको बारेमा जेजस्तो सहमति भएका छन्, त्यसमध्ये केही कार्यान्वयन भइसकेको र केही कार्यान्वनको अवस्थामा रहेको बताएका थिए । कोरोनाको अवस्था हेरेर अनसन स्थगित गरी बाँकी विषयमा पछि छलफल गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
त्यसैगरी पार्टी एकीकरणको बाँकी कामको विषयमा पनि अध्यक्षद्धयले छलफल गरिरहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रतिक्रिया दिए । अर्को बैठकमा उक्त विषयमा पनि छलफल हुने उनको भनाई छ । त्यस्तै, प्रदेशको नामाकरण गर्ने अधिकार संवैधानिक रुपमा प्रदेशसभालाई रहेको र सोहीअनुसार प्रदेशसभाले प्रदेश ५ को नामाकरण गरेको बताउँदै उनले प्रदेशसभाले गरेको निर्णय सही रहेको बताए । उनले प्रदेशको नामाकरणका विषयमा कुनै दल वा व्यक्तिले आ–आफ्नो कुरा राख्नु सही भएको तर प्रदेशसभामा जुन घटना भयो त्यो निन्दनीय रहेको बताए ।